လာလည်သူ မိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာပါရှင်။ :)
စုဘူးအိမ် Blog မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ ကူးယူဖော်ပြ ပါက ရေးသားသူအမည် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန် လေးစားစွာ
ရိုးရာ အစားအစာများ (23)
ငါးဖယ်ကြော် ငါးဖယ်ကြော် ကို စားရတာ ရိုးမသွားအောင်...
Posted by subuueain | Labels: အကြော်များ
ငါးဖယ်ကြော် ကို စားရတာ ရိုးမသွားအောင် အစာပလာ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နည်းတစ်မျိုးနဲ့
ကျွန်မ အမျိုးသားက ငါးဖယ်ကြော်ပလိန်း၊ ငါးဖယ်ချက် မကြိုက်ပါဘူး။
ကျွန်မက ငါးဖယ်ဆို ချက်စားတာထက် ကြော်ထားပြီး တစွတ်စွတ် နှိုက်စားရတာကို ကြိုက်တာပါ။
ခုတော့ နှစ်ယောက်လုံး စားလို့ရအောင် စတိုလ်ပြောင်း ကြော်ကြည့်တော့ သူလည်းကြိုက်တာကြောင့် ခဏခဏကြော်စားဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းဖြူပူပူလေးနဲ့ စားလို့လည်းကောင်း ၊ ဒီအတိုင်း စားလို့လည်း အရမ်း အရသာရှိပါတယ်။
ငါးဖယ်ကို ပုံမှန်တော့ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ ညက်ညက်ထောင်းနဲ့ စေးပိုင်နေအောင် ရောထောင်းပြီးမှ သေးသေးလေးတွေ ပြားပြီး ကြော်တာပါ။
ခု ငါးဖယ်ကို ပုံမှန်ထောင်းနေကြအတိုင်း ထောင်းပါတယ်။
ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ နနွင်းပါလေကာ၊ အရောင်တင်မှုန့် နည်းနည်း၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း (စားနိုင်သလောက်) တောက်တောက်စင်း၊ ပဲသီးလှီးထည့်၊မုန်ညင်းထုတ် ကြိုက်တတ်ရင် တောက်တောက်စင်းပြီးထည့်ပါ။ ရှောက်ရွက်နည်းနည်းလှီးပြီး အနံ့ မွှေးအောင်ထည့် သေချာနယ်ပြီး လက်ကိုဆီစွတ် အပြားလေးတွေ လုပ်ပြီး မီးအေးအေးလေးနဲ့ ကြော်ထားတာပါ။ မွှေးပြီး ငရုတ်သီးအရသာ ရှိန်းရှိန်းလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းလှပါတယ်။ သုံးဆောင်ကြည့်ပါနော်။ :)
ဘလော့လေးကို တန့်မသွားအောင် တစ်လ ကို အသစ်တစ်ခုတော့ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်နော်။ ဟင်းအသစ်အထူးအဆန်းလည်း မချက်ဖြစ်တာရယ်။ သိပ်မအားတာရယ်ကြောင့်ပါနော်။ လာရောက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ :)
Posted by subuueain
Posted by subuueain | Labels: ဟင်း(အသီးအရွက်)
ဘလော့လာ မိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါရှင်။
မရေးတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘလော့လေးကို ဇရစ်ရိုးလေးနဲ့ ဖုန်လာခါတာပါ။ :D
ဇရစ် ကို ပင်နီစူးလားက ဝယ်လာပါတယ်။ (၁) စည်း ၁ ဒေါ်လာနဲ့ ၂ ဒေါ်လာဖိုးပေါ့။
ကဲ.. စချက်ပါပြီနော်။ ဇရစ်ကို လက်တစ်ဆစ် စာလောက် လှီးဖြတ်ပါတယ်။
အရိုးပိုင်းလေးတွေကို ဓါးနှောင့်လေးနဲ့ ထုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဇရစ်တွေကို နနွင်း နည်းနည်း ၊ဆားနည်းနည်း ထည့်ထားတဲ့ ရေထဲမှာ အစေးကုန်အောင် ခဏ စိမ်ထားပါတယ်။ ပြီးမှ ရေစင်အောင် ပြန်ဆေးပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်နီ ၊ ဖြူ ဆီသတ်ပါတယ်။
အရောင်တင်၊ ငါးပိ အနည်းငယ် ၊ ဆား ၊ ကြက်သားမှုန့်တို့နဲ့ အနှစ်လေး လုပ်ပါတယ်။
ပြီးရင် ဇရစ်ထည့်၊ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး တည်ပါမယ်။ ဇရစ်လေး နူးရင် ဟင်းအိုးချလို့ရပါပြီနော်။
ဇရစ် သိပ်မနွမ်းခင် ဟင်းအိုးချပါနော်။
ဒါဆိုရင် ရာသီစာ ဇရစ်ကြော်လေး စားကြပါဦးနော်။ ကျွန်မ မေမေရဲ့ favourite ဟင်းလေးပါ။ :)
စင်ကာပူမှ မိတ်ဆွေများ ဇရစ်ရိုးလေးကို မက်မောတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပင်နီစူလာ ၃ထပ်က ရွှေအင်းဝနဲ့မျက်စောင်းထိုး ဆိုင်နာမည် (ရွှေစင် ထင်ပါရဲ့) မှာ သွားရောက်ဝယ်ယူပြီး ရာသီစာလေး စားလိုက်ကြပါဦးနော်။
Posted by subuueain | Labels: အသုတ်များ
Happy New Year ပါ။
ရေမုန်ညင်း ကို ရေနွေးဖျော ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး ၊ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီး၊
ဆား၊ ငံပြာရည်၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆီချက်၊ သံပုရာရည် နည်းနည်းညှစ်ပြီး
ပဲပုတ်ကင်ပြီးထောင်းထားတာ ထည့်သုတ်ပါတယ်။ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့်သုတ်ပါ။
ရှမ်းပုံစား ဆိုင်က နည်းလေးပါ။
မေမြို့ ဂေါ်ရခါးညွန့် နုနုလေးတွေကို သင် ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ ဓါးပြားရိုက် ။ ကြက်သားမှုန့်လေးနဲ့ ငရုတ်ကြမ်းမှုန့်လေးနဲ့ ကြော်ထားတာပါ။ ကောင်းမှကောင်း :)
Posted by subuueain | Labels: ရိုးရာ အစားအစာများ
ဝက်ခေါင်းသားလေး နဲ့ မြီးရှည်လေးပါ။
မန္တလေး မြီးရှည် စစ်စစ် ပါဗျာ။ မန္တလေးရဲ့ နာမည်ကြီးမြီးရှည် ဖြစ်ပြီး ၁၆လမ်းနဲ့ ၈၁ လမ်းထောင့်မှာ ရှိတာပါ။
မန်း မြီးရှည်ဆိုင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အထမ်းလေးနဲ့ပါ။ ထိုင်စားစရာ စားပွဲ ကုလားထိုင် သီးသန့် မရှိဘဲ ခွေးခြေခုံလေးတွေကို ဆက်ပြီး စားပွဲလုပ်။ နောက်ခုံတစ်ခုနဲ့ ကုလားထိုင် လုပ်ပြီး စားကြရတာပါ။
အသားသုတ်လည်း သတ်သတ်မှာစားလို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတော့ ရှာမတွေ့လို့တင်တော့ဘူးနော်။
ဟင်းရည်ကလည်း ဝက်ရိုးကို နူးမြေ့နေအောင် ထည်ထားတော့ ချိုပြီးလေးနေတာဘဲ။
ပထမ ဟင်းရည်ပန်းကန်မှာ ဝက်ရိုးထည့်ပေးပြီး နောက်ဟင်းရည်ထပ်တောင်းရင်တော့ အရိုးပါတော့ဘူးဗျ :)
အိမ်မှာ ဘယ်လိုဘဲ လုပ်စားစား ဆိုင်လက်ရာကို မမှီတာတော့ အမှန်ဘဲဆိုတော့ မန်းမြီးရှည်တွေမှာ secret receipe ရှိမှာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ကျွန်မလုပ်စားတဲ့ မြီးရှည်ကိုတော့ နောက်မှ သတ်သတ်တင်ပေးပါ့မယ်။
အဲဒီဆိုင်က မနက်(၁၀.၃၀) လောက်က စဖွင့်ပြီး နေ့လည်(၂) နာရီလောက်ဆို ဆိုင်သိမ်းပါတယ်။ လူတွေလည်းများတော့စောင့်ရတာတော့နည်းနည်းကြာတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေမန်းမြေကို ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ သွားရောက်စားသုံးကြည့်ပါလို့ ။
သီတင်းကျွတ်လရဲ့ ရာသီစာ ပုရစ်ကြော်လေးပါ။
ဒီအတိုင်းလေးဘဲ စားစား ။ ထမင်းဆီဆမ်းလေးနဲ့ဘဲ စားစား အကြောတက်ပေမဲ့ စားလို့ကောင်းလှပါတယ်။
ဗိုက်ထဲက ဖောက်စရာရှိတာလေးတွေ ဖောက်ထုတ်ပြီး ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ နိုင်နိုင်နဲ့ ကြော်ပါတယ်။
ပုရစ်အမတွေက ဗိုက်ထဲမှာ ဥလေးတွေပါပြီး စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ဆိုင်က ကြော်ပြီးသားဘဲ ဝယ်စားပါတယ်။ :)
Posted by subuueain | Labels: ဟင်း(သား၊ငါး)
ပုစွန်ထုတ်ဆီပြန် ရာဇဝင်လေးက တော့ မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် ဖတ်တုန်းက ချက်စားဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ပုစွန်ထုတ်ချက်ရင် ကျွန်မက ဘယ်တော့မှ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဂျင်းမထည့်ပါဘူး။ သက်ခိုင်ထဲမှာ ပုစွန်ထုတ်ကို ခရမ်းချဉ်သီး အကွင်းလိုက် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ အဝိုင်းလေးတွေကပ်ပြီး ဆီပြန်ချက်ထားတာကို ဖတ်ရင်းနဲ့ စားချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ ချက်စားဖြစ်တာပါ။
ပုစွန်ထုတ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ချေးကြောင်းထုတ်၊ ခေါင်းဖြုတ်ပြီး ဆား၊ နနွင်းနယ်ထားပါတယ်။
ကြက်သွန်နီကို ဆီများများ ထည့်ပြီး ခြောက်နေအောင် ကြော်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို ပါးပါးလှီးထည့် ၊အရောင်တင်မှုန့်ထည့်ပြီး ပုစွန်ထည့်ပါတယ်။
ဟင်းအိုးချခါနီး ပုစွန်လေးကွေးမှ ခရမ်းချဉ်သီး အကွင်းလိုက်လှီးတာလေးနဲ့ နံနံပင် အုပ် ၊ အပေါ့အငန်လေး မြည်းပြီး ကြက်သားမှုန့်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်။ yummy...
ကြေးအိုးဆီချက် နဲ့ ကြေးအိုး
ကြေးအိုးဆီချက်ကတော့ အမေ့အတွက်ပါ။ :) ဒါကတော့ ကြေးအိုး အရည်နဲ့ပါ။ ကျွန်မကတော့ အရည် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ :) ကျူဆိုင်၊ပဲပြား၊ငုံးဥ၊ကိုက်လန်၊မုန်ညင်းန...
ကြေးအိုးလုပ်စားဖြစ်တဲ့နေ့ကပါ။ နည်းနည်းတော့ကြာနေပြီ။ ခုမှ ဓါတ်ပုံတွေ့ လို့ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ :) သေချာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ :)...
ငါးဖယ်ကြော် ငါးဖယ်ကြော် ကို စားရတာ ရိုးမသွားအောင် အစာပလာ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နည်းတစ်မျိုးနဲ့ ကြော်တာပါ။ ကျွန်မ အမျိုးသားက ငါးဖယ်ကြေ...
့ ကြာဇံကြော် ကို အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ကျွေးတုန်းက ကျွန်မကြော်တဲ့ နည်းအတိုင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ မိမိနှစ်သက်ရာ အသားနဲ့ကြေ...
Happy New Year ပါ။ ရေမုန်ညင်း ကို ရေနွေးဖျော ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး ၊ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီး၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆီချက်၊ သံပု...
ဆီထမင်းဝါဝါလေးကို Rice Cooker နဲ့အလွယ်တကူချက်စားမဲ့နည်းလမ်းကတော့ ထမင်းအိုးထဲမှာ ဆီနည်းနည်းထဲ့ပြီး ဆီကျက်ရင် နနွင်းမှုန့်လေးထည့်ပြီး ကြက်သွ...
အိမ်မှာ အခုတလော ခရမ်းချဉ်သီးတွေပေါနေတာမို့ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက် ချက်စားမလို့စိတ်ကူးကြည့့် လိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး လိတ်နေ ...
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မုန့်တီသုတ်လေး သုတ်စားဖြစ်ပါတယ်။ မုန့်တီသုတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အဓိက ပစ္စည်းတွေကတော့ ပဲမှုန့်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကောင်းကောင်း၊ င...
ပုစွန်ကို အမျိုးမျိုး လုပ်စားကြမယ်..
နောက်တစ်မျိုးလုပ်စားဖြစ်တာကတော့ ပုစွန်တောသုတ်လေးပါ။ ပုစွန်ကို ဟန်ဟန်ပန်ပန် သုတ်တာမဟုတ်ဘဲ လှော်ပြီးသားပုစွန်ကို သင့်ရုံလှီးပြီး မန်ကျီးသီး...
မာလာဟင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင် တွဲဖက်စားဖို့ အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ အသားကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ မန္တလေးမှာမာလာဟင်း နှင့် အကင်ဆိုင်တွေအရမ်းပေါပါ...
Copyright 2010 စုဘူးအိမ်.All rights reserved.Powered by Blogger